1 Madzimambo 15:1-34
15 Zvino mugore rechigumi nemasere raMambo Jerobhoamu+ mwanakomana waNebhati,+ Abhijamu akava mambo waJudha.+ 2 Akatonga kwemakore matatu ari muJerusarema; uye amai vake vainzi Maaka,+ muzukuru waAbhisharomu.+ 3 Akafamba muzvivi zvose zvababa vake zvavakaita iye asati avapo; uye mwoyo wake hauna kuva wakakwana+ kuna Jehovha Mwari wake, somwoyo watateguru vake Dhavhidhi.+ 4 Nokuti, nokuda kwaDhavhidhi,+ Jehovha Mwari wake akamupa rambi+ muJerusarema nokumutsa mwanakomana akamutevera nokuchengeta Jerusarema riripo,+ 5 nokuti Dhavhidhi akaita zvakanga zvakarurama pamberi paJehovha, haana kutsauka chero pachinhu chipi zvacho chaakanga amurayira mazuva ose oupenyu hwake,+ kunze chete kwenyaya yaUriya muHiti.+ 6 Hondo yakavapo pakati paRehobhoamu naJerobhoamu mazuva ose oupenyu hwake.+ 7 Mamwe mabasa ose aAbhijamu nezvose zvaakaita, hazvina kunyorwa here mubhuku+ remabasa emazuva emadzimambo aJudha? Paivawo nehondo yakaitika pakati paAbhijamu naJerobhoamu.+ 8 Abhijamu akazorara nemadzitateguru ake, vakamuviga muGuta raDhavhidhi;+ uye mwanakomana wake Asa+ akatanga kutonga panzvimbo pake. 9 Mugore rechimakumi maviri raJerobhoamu mambo waIsraeri, Asa akatonga samambo waJudha. 10 Akatonga kwemakore makumi mana nerimwe chete ari muJerusarema; uye ambuya vake vainzi Maaka+ muzukuru waAbhisharomu.+ 11 Asa akaita zvakanga zvakarurama pamberi paJehovha, saDhavhidhi tateguru vake.+ 12 Naizvozvo akaita kuti pfambi dzechirume dzepatemberi dzibviswe munyika yacho,+ akabvisa zvidhori+ zvose zvaisemesa sendove zvakanga zvagadzirwa nemadzitateguru ake.+ 13 Akabvisawo ambuya vake Maaka,+ pakuva vahosi,+ nokuti vakanga vagadzirira danda dzvene chidhori chinotyisa; Asa achibva azotema chidhori+ chavo chinotyisa, akachipisira+ mumupata une rukova weKidroni.+ 14 Asi haana kubvisa+ nzvimbo dzakakwirira.+ Kunyange zvakadaro, mwoyo waAsa wakava wakakwana kuna Jehovha mazuva ake ose.+ 15 Akatanga kuuya nezvinhu zvakaitwa zvitsvene nababa vake nezvinhu zvaakanga aita zvitsvene muimba yaJehovha, sirivha nendarama nezvimwe zvinhu.+ 16 Hondo yakavapo pakati paAsa naBhaasha+ mambo waIsraeri mazuva avo ose. 17 Naizvozvo Bhaasha mambo waIsraeri akaenda kunorwisa Judha, akatanga kuvaka Rama,+ kuti asabvumira chero munhu upi zvake kubuda kana kupinda maiva naAsa mambo waJudha.+ 18 Asa akabva atora sirivha yose nendarama yakanga yasara papfuma yeimba yaJehovha nepfuma yeimba yamambo akazviisa mumaoko evashandi vake; Mambo Asa akazvitumira kuna Bheni-hadhadhi+ mwanakomana waTabrimoni, mwanakomana waHeziyoni, mambo weSiriya,+ aigara muDhamasiko,+ achiti: 19 “Pakati pangu newe pane sungano, pakati pababa vangu nababa vako. Tarira ndakutumira chipo+ chesirivha nendarama. Uya, putsa sungano yako naBhaasha mambo waIsraeri, kuti abve kwandiri.”+ 20 Naizvozvo Bheni-hadhadhi akateerera Mambo Asa, akatuma vakuru vake vemauto ehondo kunorwisa maguta aIsraeri, vakarwisa Ijoni+ neDhani+ neAbheri-bheti-maaka+ neKinereti yose, kusvikira kunyika yose yaNaftari.+ 21 Bhaasha paakangozvinzwa, akabva arega kuvaka Rama,+ akaramba achigara muTiza.+ 22 Mambo Asa akabva ashevedza vaJudha vose+—hapana akasiyiwa—vakatakura matombo eRama nematanda aro, zvakanga zvichivakiswa naBhaasha; Mambo Asa akatanga kuzvivakisa Gebha+ riri muBhenjamini, neMizpa.+ 23 Zvino mamwe mabasa ose aAsa nokuva nesimba kwake kwose nezvose zvaakaita nemaguta aakavaka, hazvina kunyorwa here mubhuku+ remabasa emazuva emadzimambo aJudha? Kungoti panguva yokukwegura+ kwake akava nehosha mutsoka.+ 24 Asa akazorara nemadzitateguru ake,+ akavigwa pamwe nemadzitateguru ake muGuta raDhavhidhi tateguru vake;+ uye mwanakomana wake Jehoshafati+ akatanga kutonga panzvimbo pake. 25 Nadhabhi+ mwanakomana waJerobhoamu, akava mambo waIsraeri mugore rechipiri raAsa mambo waJudha; akaramba achitonga Israeri kwemakore maviri. 26 Akaramba achiita zvakaipa+ pamberi paJehovha, akafamba munzira yababa vake+ nomuchivi chavo chavakanga vatadzisa Israeri nacho.+ 27 Asi Bhaasha+ mwanakomana waAhija weimba yaIsakari akatanga kumumukira; Bhaasha akamuurayira kuGibhetoni,+ raiva revaFiristiya, Nadhabhi nevaIsraeri vose pavakanga vachikomba Gibhetoni. 28 Naizvozvo Bhaasha akamuuraya mugore rechitatu raAsa mambo waJudha, akatanga kutonga panzvimbo pake.+ 29 Paakangova mambo, akauraya imba yose yaJerobhoamu. Haana kusiya ani naani anofema pane vaJerobhoamu kusvikira avatsakatisa, maererano neshoko raJehovha raakanga ataura achishandisa mushumiri wake Ahija muShiro,+ 30 nokuda kwezvivi zvaJerobhoamu zvaakaita+ uye zvaakatadzisa Israeri nazvo uye zvinogumbura zvaakagumbura Jehovha Mwari waIsraeri nazvo.+ 31 Mamwe mabasa ose aNadhabhi nezvose zvaakaita, hazvina kunyorwa here mubhuku+ remabasa emazuva emadzimambo aIsraeri? 32 Hondo yakavapo pakati paAsa naBhaasha mambo waIsraeri mazuva avo ose.+ 33 Mugore rechitatu raAsa mambo waJudha, Bhaasha mwanakomana waAhija akava mambo wevaIsraeri vose muTiza kwemakore makumi maviri nemana.+ 34 Akaramba achiita zvakaipa pamberi paJehovha,+ akafamba munzira yaJerobhoamu+ nomuchivi chake chaakatadzisa Israeri nacho.+